Tim Cook waa cad yahay: AirPods Pro ma badalayo AirPods | Wararka IPhone
Tim Cook waa cad yahay: AirPods Pro ma ahan bedelka AirPods
Tuurista hadba dhinac in AirPods Pro, In kasta oo ay ku habboon tahay badeecada lafteeda, haddana weligeed ma joojinayso inay iga yaabiso. Waxaa jira halo muhiim ah oo qarsoodi ah oo ku saabsan sida Apple wax ugu qabatay sheygan, iyo sidoo kale su'aal: Maxay u maamuli weyday inay sii daayaan iPhone kasta si qarsoodi ah?
Sidoo kale, Maamulaha guud ee Apple wuxuu rabaa inuu cadeeyo in AirPods Pro uusan badali doonin AirPods caadi ah, laakiin ay yihiin comkabid. Si kale haddii loo dhigo, ujeedka dhabta ah ee shirkadda Cupertino waxay ahayd inay samayso noocyo badan oo ka mid ah dhagaha dhagaha ee 'True Wireless headphones'.
Warkan waxaa la siiyay maalgashadayaasha halka natiijooyinka rubucii ugu dambeeyay ee maaliyadeed ee sanadka loo daabacay shirkadda Cupertino, taas oo qaybta "accessories" ay heshay wadar ahaan 6.500 milyan oo doolar oo faa'iidooyin ah. Dhab ahaantii iyo inkasta oo khilaafaadka oo dhan, AirPods waxay ku kala duwan yihiin naqshadeynta jiilka koowaad waxay heshay caan aad u sareysa, jidadkana waxaa ka buuxa AirPods, iyo nuqulo ka mid ah AirPods. Si kastaba ha noqotee, imaatinka AirPods Pro-kan ayaa dhigaya mowqif muhiim ah kaas oo doonaya inuu helo mid ka mid ah alaabtaan markii ugu horeysay, AirPods Pro ma bedel buu u yahay AirPods?
Uguyaraan maaha Tim Cook, AirPodskan cusub ee Pro ayaa si fudud u kabaya kuwa raadinaya "wax badan" AirPods, gaar ahaan buuq baajinta. Wax la mid ah ayaa horeyba uga dhacaya kala duwanaanshaha iPad-ka iyo noocyada 'MacBook', oo leh badeecad gelitaan ganacsi, iyo badeecad "Pro" ah oo leh taxane xoogaa sifooyin gaar ah leh, oo sida muuqata ka qaalisan. Dhinaca kale, AirPods Pro wuxuu ka bilaabmaa 279 euro, halka qaar AirPods ah oo leh fiilo la'aan wireless horeyba loo dhigay 229 euro, Ma mudan tahay maalgashiga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Tim Cook waa cad yahay: AirPods Pro ma ahan bedelka AirPods
Kala duwanaanshaha qiimaha haddii ay u qalanto marka loo eego jiilka labaad ee AirPods oo leh kiis wireless maadaama farqiga u yahay kaliya € 50
Iibsasho 24-bil oo dulsaar la'aan ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Apple Card